किन माउण्ट फुजी अफ-सिजनमा चढ्नु हुदैन। | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > Shizouka > किन माउण्ट फुजी अफ-सिजनमा चढ्नु हुदैन।
हरेक बर्ष २.५ लाख मानिसहरु जापानको फुजी हिमाल चढ्दछन। फुजी हिमाल चढ़न सहि मानिने जुलाई र अगस्ट महिनामा मानिसहरुको यो हिमाल चढ्ने ठूलो भिडनै हुन्छ। हजुरले पक्कै पनि केहि भयानक कथा सुन्नु भएको होला। जस्तै मानिसहरु लाईनमा अड्केको वा हिमालको सानो घरमा खादिएर बास बस्नु परेको कथाहरु आईरहनछन। यस्तो कथा सुनेपछि हजुरलाई पक्कै पनि फुजी अरु महिनामा चढ्न मन लाग्नु सामान्य हो। अर्को कुरा हजुर जापान जून महिना तिर थोरै समयको लागि आउनु हुने भयो र फुजी हिमाल चढ्ने हजुरको बकेट लिस्टमा हुन सक्छ। तर अनुभबी पर्वतारोहीले पनि फुजी हिमाल अफ-सिजनमा चढ्न रिकमेण्ड गर्दैनन्। आज हामी हजुरहरुलाई यहि बिसयमा रहेर जानकारी गराउनेछौ। किन फुजी हिमाल अफ-सिजनमा चढ़नु हुदैन त ?
१. तापक्रम धेरै जसो फ्रीजिंग पोइन्ट भन्दा न्युन झरी रहन्छ
फुजी हिमालको समिटको तापक्रम जून र सेप्टेम्बर महिनामा पनि बरफ जम्ने भन्दा न्युन हुने गर्दछ। यदि हजुरले हिमाल चढ्ने राम्रो तयारि गर्नु भएको छैन भने यो तापक्रमले हाईपो थर्मिया हुन सक्दछ। हाईपो थर्मियाले ज्यानलिने स्थिति निम्त्याउन सक्दछ। जुलाई र अगस्ट महिनामा भने हिमालको समिटको तापक्रम रेगुलर रुपमा सुन्य भन्दा थोरै भए पनि माथि हुने गर्दछ।
२. अफ-सिजनमा हावा निकै नराम्रो संग लाग्दछ
हजुर जापानको सबै भन्दा अग्लो हिमाल चढ्दै हुनु हुन्छ भन्ने कुरालाई नजर अन्दाज गर्नु हुदैन। उचाइ बढे संगै मौसम निकै प्रतिकुल हुदै जादछ। फुजी हिमालमा एभरेज हावाको गति २५ माईल प्रति घण्टा हुने गर्दछ। तर जुलाई र अगस्टमा भने हावाको गति ५ माइलमा झर्दछ। हावाको गति बढे संगै साचिकैको तापक्रम भन्दा निकै बढी चिसो महसुस हुदछ। एक चोटी सेप्टेम्बर महिनामा फुजी हिमालमा हावाको गति २०० माईल प्रति घण्टा रेकर्ड गरिएको थियो। त्यसैले पनि अफ-सिजनमा फुजी हिमाल चढ्ने नसोच्नुहोस।
३. हिमालमा हिउ जमिरहेको हुदछ
जुलाई महिनाको सुरुवाती तिर पनि हिमालमा अझै हिउ जमिरहेको हुने गर्दछ। त्यसको मतलब जून महिनाको तिर त समिटमा बाक्लो हिउ र बरफ हुन्छ। त्यसैले अरु महिनामा राम्रो हाईकिङ्ग बुट, ट्रेकिंग पोल र आईस एक्स भएन भने हिउमा चिप्लिने सम्भावना धेरै हुदछ । त्यसैले फुजी हिमाल चढ्न धेरैले जुलाई महिना रोज्नुको कारण यो पनि हो।
४. हिमालका साना घर सबै बन्द हुन्छन।
फुजी चढ्ने सबै तिरको बाटो मा ५० देखि २०० वटा स-साना घरहरु छन्। पर्वतारोहीहरु धेरै जसो यी घरमा भोलि पल्टको सुर्योदय हेर्न राति बास बस्छन। अफ-सिजनमा बास बस्न यी घरहरु बन्द हुने हुनाले धेरै जसो मानिसहरु राति आरोहन गर्ने गर्छन। तर यसो गर्दा निकै खतरा हुन्छ। यदि हजुर माउण्ट फुजिमा क्याम्पिंग गर्ने सोच्दै हुनु हुन्छ भने होस् गर्नु होस् हावा हुरीले हजुरको टेन्ट उडाउन सक्छ।
५. बाथरुम सर्भिस पनि बन्द हुन्छ
अफ-सिजनमा बाथरुम सर्भिस पनि बन्द हुने गर्दछ। अनि खुल्ला टोइलेट गर्न यहाँ गैरकानुनी मानिन्छ। माउण्ट फुजीको यात्रा लगभग १० मिनेट भन्दा लामो हुने गर्दछ। त्यसैले हाईकरहरुले आफै पोर्टेबल टोइलेट बोक्नु पर्ने हुदछ। पोर्टेबल टोइलेट बोक्न भारि नहुने भएता पनि खुल्ला दिशा पिसाब गर्न मानिसहरुलाई अफ्ठेरो लाग्न सक्दछ। त्यसैले पनि मानिसहरु सिजनमा मात्र यहाँ चढ़दछन्।
६. फुड र ड्रिङ्क स्ट्याण्ड पनि बन्द हुने गर्दछ
त्यसैगरी अफ-सिजनमा फुड र ड्रिङ्क स्ट्याण्ड पनि बन्द हुदछ। हजुरले आफुलाई चाइएको जति खाना लिएर आउनु सक्नु हुन्छ। अनि पानी त पक्कै पनि धेरै लिएर आउनु होस्। अनुभबी आरोहीहरुले पनि थुप्रै पानी लिएर आउछन। हिमाल चढ्दा धेरै पसिना आउने हुनाले हाईड्रेटेड भै रहनु पर्ने हुन्छ। यदि हजुरलाई यी सामान बोक्न भारि लाग्दछ भने पक्कै सिजनमा चढ्नुहोस्। किनकि यो बेला धेरै खाना र पानीको स-साना स्टलहरु हुन्छन।
७. रेस्क्यु गर्ने कोहि हुदैनन्
यो पक्कै पनि अफ-सिजनमा फुजी चढ्दाको सबै भन्दा डरलाग्दो स्थिति हुन सक्दछ। अफ-सिजनमा रेस्क्यु स्टाफ हुदैनन्। यति मात्र नभई हजुर संग चढ्ने अरु मानिस पनि निकै थोरै हुन्छन। यदि हजुरलाई केहि गरि हाइपोथर्मिया वा लेक लाग्यो भने , रेस्क्यु टिमलाई आउन धेरै समय लाग्न सक्दछ। यो समय सम्म हजुरको अवस्था निकै नाजुक हुन सक्दछ।
वेबसाइट : फुजी हिमाल चढ्नको लागि अफिसिअल वेबसाईट
translated in Nepali